lacagta dibaajiga iyo soo celiyo - Tenants Victoria
Dibaajiga waa lacag la siiyo inta badan milkiile guri ama ay sidoodii dhabta wakaalo bilowgii aad kireyste. Waxaa la qabtay Maamulka Isku xerka (Bond Authority) Residential Tenancies (Residential Tenancies), taas oo macnaheedu yahay in ay weli aad lacag iyo ma iska leh ee milkiile guri ama wakaalo.
Marka ay dhamaato aad kireyste milkiile guri ah isku dayi karaa iyo sheegasho qaar ka mid ah ama dhammaan dibaajiga sida magdhaw wixii waxyeelo in hanti ah, nadiifinta ama kiro/ijaar aan la bixin.
Talooyin ugu hesho dibaajiga dib
Sawirro:Qaad sawirro sida ay u eg yihiin hantida aad kireysatay marka aad u soo guureyso iyo marka aad ka guureyso haddii aad dooneyso inaad ka taxadirto muran marka aad aad dib u qaadaneyso isku xerkaaga.
Warbixinta xaaladda:U buuxinta warbixinta xaaladda si taxadir leh bilowga iyo dhammaadka kiradaada waxay macnaheedu noqon kartaa kala duwanaanshaha u dhaxeeya xafidaadda isku xerka iyo lumista qaar ama dhammaan iyadda dhan.
labisnaanta iyo dilaacidda: Kireystayaasha kama masuul aha wanaagga labisnaanta iyo dilaacidda. Maahin inaad bixiso natiijooyinka isticmaalka caadiga ah, sida daahyadda qorraxdu ay midab dishay ama roogagga dhamaaday ku soocoshadda darteeda.
qiimo dhan ama qeyb qiimaha ka mid ah? Kireystayaasha marwaliba masuul kama aha qiimaha dhan ee bedelaadda dhamaadka, qalab waxyeeloobay kuwo cusbu lagu bedelaayo, xittaa haddii ay sababeen waxyeelo qaarkeed. Tusaale ahaan, waa inaad ku dartaa qiimaha roog laga bixinaayo wasaqdda aad ku reebtay, laakiin lagama maarmaan maahin inaad bixiso roog cusub.
Cadeyn:Guud ahaan, waxay ku xiran tahay milkiilahaaga guriga inuu cadeyo sababta lacagtaada isku xerka ah aan dib laguugu soo celinin. dhinacaaga aad ayuu u xoogan yahay hadddii aad hesho cadeymahaaga kuu gaarka ah si aad u tusto maxaadan adiga ugu masuul aheyn waxyeeladda.
Pesaa: Libsiga iyo Advocate Redfern Legal CentreKireystayaal ‘Tom McDonald (Imechapishwah Juni 2014)
Marka aad bixiso isku xerka ah, waa in aad iyo milkiile guri ama wakaalo saxiixa Foomka Keydinta isku xerka ah Dhameystirtay ka (Residential Tenancies) Maamulka Isku xerka (Bond Authority) ah (RTBA).
Haddii Agasimaha Guriyeynta (Director of Housing) ah (DoH) dhiibayaan aad dibaajiga hoos (Amahda Dibaajiga Qorsheysan) (Bond Loan Scheme) ah, waxaad u baahan doontaa inaad saxiixdo a dhameystirtay DoH Foomka Keydinta dibaajiga. Haddii DoH ay bixinayso qayb ka mid ah isku xerka, waa in aad isticmaasho DoH Foomka Keydinta isku xerka ah cadadka ay bixiso, iyo Maamulka Dibaajiga (Bond Authority) Foomka Keydinta dibaajiga ah inta ka dhiman dibaajiga ah.
The milkiile guri ama wakaalo waa inuu ku siiyaa nuqul ka mid ah foom / s ah, oo waa in aad haysato diiwaan ahaan bixinta dibaajiga aad.
Haddii aad bixiso dibaajiga ah, ee milkiile guri ama wakaalo waa inuu ku siiyaa 2 nuqul oo ah Warbixinta Xaallada oo uu ku saxeexan milkiile guri ah.
The milkiile guri ama wakaalo waa xereeyaan lacagta isku xerka aad iyo Foomka Keydinta dibaajiga / s la Maamulka Dibaajiga (Bond Authority) 10 maalmood oo shaqo oo idinka mid ah waxaa bixinaya gudahood. Waxaa waajiba inaad ka Maamulka dibaajiga (Bond Authority) in milkiile guri ama wakaalo ayaa xerayso dibaajiga helaan. Haddii aadan ku hellin 15 berri gudahood, waa inaad la xiriirtaa Maamulka Dibaajiga (Bond Authority) ah ☎ 1300 137 164 (kharashka wicitaanka).
Waa dembi haddii aad dibaajiga aan la hoydeen. Waxaad si Xiriirka Macaamiisha Victoria (Consumer Affairs Victoria) sheegi kartaa, iyo sidoo kale waxaad ka dalban kartaa VCAT for Dalab u baahan aad milkiile guri xareysaa dibaajiga.
Guud ahaan, waa dhaqanka wanaagsan in aan la bixin dibaajiga ilaa ka dib markii aad saxiixday heshiiska kirada. Mar kasta hubso in aad hesho caddeymo qaar ka mid ah marka aad bixiso dibaajiga ah, gaar ahaan haddii aad bixiso lacag caddaan ah.
wareejinta aad dibaajiga
Haddii aad ka guurto ah hanti iyo milkiile guri iyo kireystayaal kale ku heshiiyeen in qof kale si ay ula wareegaan aad kireyste, waa inaad u sheegtaa Maamulka Dibaajiga (Bond Authority) 5 maalmood in aad xiisaha dibaajiga ayaa loo wareejiyay kireyste/ijaarte cusub gudahood. Waxaad ku samayn kartaa adigoo buuxinaya foom Transfer kireyste/ijaarte ah (oo waa in aad adigu saxiixday, kireystayaal kale (haddii ay jirto), kireyste/ijaarte cusub iyo milkiile guri ama wakaalo) una diraya Maamulka Dibaajiga (Bond Authority) ah. Maamulka dibaajiga (Bond Authority) ma sii daayo lacag dibaajiga ilaa dhamaadka kireyste ah sidaas awgeed waa in aad si aad u sameysato bixinta ka kireyste/ijaarte cusub. Waa inaad lacagta ka soo kireyste/ijaarte soo socda ka hor inta aadan saxiixin foom ah Hamisho kireyste.
marka shishaysa kireyste ah
Haddii aadan wareejiyo aad dibaajiga qof kale, waxaa la qabtay la MaamulkaDibaajiga (Bond Authority) ilaa dhamaadka kireyste ah, marka dhowr arrimood ay dhacaan:
aad milkiile guri dhigaysa sheegasho uma hayno aad dibaajiga
aad ku raacsan tahay milkiile guri ku saabsan lacagta ah in la siiyo iyaga ka mid ah oo aad dibaajiga
aadan gaari karin heshiis la milkiile guri oo ay ka codsan in Golaha Maamulka Xeer ilaalinta iyo bulshadda Victorian (Victorian Civil and Administrative Tribunal) ee Dalab ah in ay la bixiyo qaar ka mid ah ama dhammaan dibaajiga
waxaad codsi ka sameyso Maxkamadda loo soo celiyo ee dibaajiga
aad milkiile guri dhigaysa sheegasho no
Haddii milkiile guri Ogolaaday in ay lama samaynta sheegasho ka dhan ah aad dibaajiga, waa in adiga iyo milkiile guri ku dalbataan in lacagta dibajiga aad u soo noqdeen. Waa in aad, kireystayaal kale (haddii ay jirto) iyo milkiile guri ama wakaalo saxiixa Sheegashada Foomka dibaajiga ah, iyo foom waa in ay bixisaa faahfaahinta akoonka bangiga in aad rabto in lacagta lagu shubayo. Marka foom lagu xereeyo Maamulka Dibaajiga (Bond Authority) ah, aad dijaabiga waa in lagu shubayaa akoonka bangiga la magacaabay maalinta ku xigta ee la shaqaynayo.
Waa dembi ah milkiile guri inay idin siiyaan Sheegashada Foomka dibaajiga aan dhamaystirnayn inay la soo wareegto. Haddii dibaajiga waa in la bixiyo si buuxda, hubi in qadarka buuxa ee dibaajiga waxaa lagu diiwaangeliyaa qaybta ‘faahfaahinta lacag bixinta kireyste/ijaarte’. Xaqiiji inaad haysato nuqul ka mid ah.
Haddii dibaajiga uu bixiyey Agasimaha Guriyeynta (Director of Housing) hoostiisa Amahda Dibaajiga Qorsheysan (Bond Loan Scheme) iyo milkiile guri uusan samaynta sheegasho kasta oo ka soo hor jeedda, adiga iyo milkiile guri ama wakaalo baahan doontaa inaad buuxiso Sheegashada Foomka dibaajiga ah iyo lacag dibaajiga ah ayaa la bixin doonaa dib si toos ah u Xafiiska Guriyeynta (Office of Housing) ah.
aad ku raacsan tahay milkiile guri
Haddii aad ogolaato in milkiile guri waxaa xaq u leedahay in qaar ka mid ah ama dhammaan lacagta dibaajiga aad, aad ku heshiin karaan in ay lacagtaas bixiyo iyaga. Waa in aad, kireystayaal kale (haddii ay jirto) iyo milkiile guri ka buuxi Sheegashada Foomka dibaajigaah, oo sheegaya inta dibaajiga waa in la siiyo milkiile guri iyo sida badan waa in la siiyo in aad.
Haddii dibaajiga waa in loo qaybiyo adiga iyo milkiile guri ah, hubi inaad ku qorto cadadka ku haboon ee ‘kireyste/ijaarte faahfaahinta lacag bixinta’ qaybta iyo ‘Qadarka lacagta la siinayo milkiile guri / wakaalo haddii lagu dabaqi karo’ qaybta. Hubi in lacagahaas ku dar ilaa wadarta guud ee dibaajiga ah.
Sheegashada Foomka dibaajiga ma aha in la buuxiyo ka hor asbuuca ugu dambeeya ee aad kireyste. Haddii foom la taariikhaysan in ka badan 7 maalmood ka hor dhammaadka kireyste, Maamulka Dibaajiga (Bond Authority) ma u aqbali doonaa. Haddii dibaajiga uu bixiyey Xafiiska Guriyeynta (Office of Housing) hoostiisa Amahda Dibaajiga Qorsheysan (Bond Loan Scheme) ah, aad ku heshiin kartaa in qayb ka mid ah waxaa la bixiyaa in milkiile guri ah. The milkiile guri ama wakaalo waa codsi ka sameyso Maxkamadda for Dalab ah in ay helaan dhammaan ama qayb ka mid ah dibaajiga ah. Taraybuunalka ayaa u sheegi doona Xafiiska Guriyeynta (Office of Housing) ku saabsan go’aan kasta oo khuseeya dibaajiga lacag ka yar Amahda Dibajiga Qorsheysan (Bond Loan Scheme) ah.
aad milkiile guri dalbatay inay qaadato dibaajiga
dibaajiga waxaa loo qaadanayaa in aad lacag, Haddii milkiile guri rabo in ay isku dayaan iyo sheegasho oo dhan ama qayb ka mid ah dibaajiga iyo aad diiddan tahay, waxaa waajiba inay dalbadaan Golaha Maamulka Xeer ilaalinta iyo bulshadda Victorianah. milkiile guri keligiis ayaa ka masuul ah in uu ka dhaadhiciyo Maxkamada in ay sheegasho waa macquul ah oo cudur daar. Claims by milkiile guri ama wakaalo waa in la sameeyaa 10 maalmood oo shaqo ah oo aad dhammaaneysa kireyste gudahood. Waxaa muhiim ah in milkiile guri ama wakaalo leeyihiin cinwaan kuu ah. Haddii aysan sidaas ahayn, ee milkiile guri iyo Tribunal adeegaan ogeysiisyada iyo waraaqaha at hanti kirada meesha aad ku noolaan jirnay. Haddii milkiile guri ama wakaalo uu leeyahay cinwaan ah waa in laguu soo diri nuqul ka mid ah ay Codsi qoraaleed, iyo sameyso Maxkamadda waxaad u soo diri doonaa ogeysiin ah dhageysi kuu sheegaya goorta iyo meesha aad in ay kor u soo jeedin si ay u difaacaan sheegasho ka dhanka ah aad dibaajiga. Waa in aad soo jeedin ilaa haddii kale milkiile guri keeni kartaa cadaymaha aan la diidanayn oo ay u badan tahay waxay ka heli doonaan wixii ay weydiiso sida Amarada la samayn karaa in aad ka maqan. Haddii aadan imaan karin dhageysi waqtiga loo qorsheeyay laga yaabaa in aad awoodid in aad beddelo dhageysi taariikhda ama ka qayb by phone ama video shir .
Codsashada aad dibaajiga waa lacag la’aan, guud ahaan waxaa jira khatar lahayn ee kharashka sharciga marka dhigata Maxkamada. Haddii aad ma gaadhi karto heshiis la milkiile guri, ama milkiile guri waxaa si fudud u qaadan waqti aad u dheer, waxaad ka dalban kartaa Maxkamada wakhti kasta ka dib marka aad ka baxdo. All aad u baahan tahay inaad samayso waa buuxiso guud VCAT Codsi qoraaleed weydiisanaya aad dibaajiga iyo dib u soo lifaaq la helo dibaajiga aad.
kireystayaal sidoo kale ka dhigi kartaa magdhaw sheegasho a waqti isku mid ah sida dibaajiga sheegasho ah.
Haddii ay adiga ama milkiile guri ka codsada Maxkamada waa, waa in aad qaadataa macluumaadka soo socda si aad u dhageysi ah:
taariikhda aad bilowday kireyste iyo nooca kireyste (muddo go’an ama mid bilbile wareegsan bil)
xaddiga dibaajiga bixisay
xaddiga ogeysiin siiyo si loo soo afjaro kireyste ah, adiga ama milkiile guri ah by
caddayn ah oo ku saabsan xaaladda hanti ee bilow of kireyste (tusaale Warbixinta Xaallada haddii aad leedahay mid ka mid ah, sawiro, rasiidhada nadiifinta, markhaati ah)
caddayn ah oo ku saabsan xaaladda hanti ee dhamaadka of kireyste (tusaale sawiro, rasiidhada nadiifinta, markhaati ah)
Haddii milkiile guri waa samaynta sheegasho ka dhan ah aad dibaajigga, waxay leeyihiin inay ku siiyaan nuqul ka mid ah foom Codsi qoraaleed iyo caddayn kasta oo ay doonayaan in ay isticmaalaan. Waxay waa in this inaad ka hor taariikhda dhageysi siin. Waa in aad qaado si aad u dhageysi ah.
Haddii dibaajiga lagu bixiyey Amahda dibaajiga Qorsheysan (Bond Loan Scheme) iyo milkiile guri ku guulaysto samaynta sheegasho ah ka soo hor jeedda, waxaad weli u baahan doontaa in aad deynta dibaajiga si Agasimaha Guriyeynta ah. deynta An aan la bixin si Agasimaha Guriyeynta (Director of Housing) ee saamayn ku yeelan kara wax codsiyada mustaqbalka in aad guryaha dadweynaha ama amaah dibaajiga ah.
Ka dib markii Maxkamada go’aan, waxaa lagu siin doonaa nuqul ka mid ah go’aanka loo yaqaan Dalab ah aad. markaas waxaad buuxin kartaa Sheegashada Foomka dibaajiga aan saxiixa milkiile guri ama wakiilada. Waxaad ku lifaaqi nuqul ka mid ah Dalab Maxkamada si Sheegashada Foomkadibaajiga iyo xerayso la Maamulka Dibaajiga (Bond Authority) Lacagta la sii dayn doono sida by Dalab. ku faray in ka badan hal kireyste/ijaarte la magacaabay rasiidka dibaajiga (tusaale guri la wadaago), adiga iyo kii kale, kireystayaal u baahan doontaa inaad isku raacdaan sida dibaajiga waa in la bixiyo si qof kasta.
Bond payments and refunds | Somali | May 2017